Hogaamiye Hal Adayg Badan Oo Han Iyo Hiigsi Madaxweyne Leh, “ Xirsi Cali Xaaji Xassan”
Xirsi cali Xaaji Xassan, waxa uu ka mid ahaa tiir dhexaadyada halganada dagaal siyaasadeed u hiimbaday hawdka iyo hamalka duureed, wakhtigii xisbiga kulmiye ku jiray ololihii doorasho, waxaanu ahaa ragii gunduciyey guushii doorashada kulmiye ee 2010 gaadhay. Waxa uu ahaa xubin firfircoon oo falal foos iyo firfircoonineed kaga far-soocnaaday ragii ay soo wada mareen dawgii halganka ee kulmiye. Waana sababta uu garabka midig ee madaxweyne siilaanyo u ahaa, tan iyo wakhtigii uu kusriga fuulay Axmed siilaanyo, sidoo kale waa sababta iyo salcaynta uu uga ag dhawaaday siilaanyo, oo uu ragii ay isku ab iyo ooda aahaayeen uga dhawesytay madaxweyne siilaanyo. Waxa uu u magacaabay xil ku cusbaa golaha wasiirada, iyo saaxada siyaasdeed ee dhismaha golaha wasiirada Somaliland, xilkaasoo ahaa “ wasiirka madaxtooyada” , markii uu madaxweynuhu arkay kartidiisa , waxa uu ka dhigay mishiinkiisa siyaasadeed iyo gacantiisa midig, sidoo kale waxa uu, kaalin muuqata oo saamayn leh iyo xilkii ugu shislaa ka siiyey, kaalmihii golahihiisa wasiirada ee ahaa 26-ka wasiir. Waxa uu ahaa masuulkii ugu saamaynta iyo hadal haynta badnaa ee xukuumadii Axmed siilaanyo.waxa uu door mihiima kulahaa dardartii waxqabad ee xukuumada siilaanyo, sidoo kale waxa uu ahaa mishiinka dhaqaajiya hawlaha waxqabad ee xukuumada.